Ukunyamekela i-Flame Angelfish | Ngeentlanzi
El idangatye i-angelfish, ithatha eli gama, ngenxa yombala oqaqambileyo obomvu no-orenji onawo emzimbeni wayo wonke, ukuba ulibonile kwi-aquarium, uyakuqaphela ukuba ijongeka ngathi lilangatye elivuthayo kunye nokuqubha, nangona kunjalo imivimbo emnyama eme nkqo Umzimba wayo kunye nohlaza okwesibhakabhaka eziphelweni. Kubalulekile ukugxininisa ukuba ezi zilwanyana zihlala zikhula ziye kwi-10 yeesentimitha ubude kwaye zingaphila ukuya kwiminyaka esi-7 ubudala.
Ukuba ucinga ukuba ne-llama angelfish kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba zizilwanyana ezihambelana kakuhle neemeko zedama. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele ezinye iingcebiso sikuzisa namhlanje, ukuze iintlanzi zikhule ngokuchanekileyo kwaye ziphile ixesha elide.
Okokuqala, ndincoma ukuba usebenzise i-aquarium enesilinganiselo esimalunga neelitha ezingama-300. Isizibae kufuneka ibe nkulu kangangoko ukuze ube nokuhonjiswa okuvumela izilwanyana ukuba zizimele kwaye zizimele. Ndikucebisa ukuba usebenzise amatye emazantsi etanki ukukhuthaza ukukhula kwendalo kunye neendidi ezahlukeneyo zokuhombisa, kuba ezi zilwanyana ziyathanda ukuzifihla kwaye zizimele ngasemva kwamatye okanye iikorale.
Gcina ukhumbula ukuba ezi ntlanzi zilungile indawo, ke kubalulekile ukuba uyongeze idangatye i-angelfish emva kokuba ungeze ezinye iintlanzi kwi-aquarium yakho. Kwangokunjalo, kubalulekile ukuba ungabeki iintlanzi zoluhlobo olunye kunye njengoko i-aquarium inokujika ibe ngumlo omiselweyo. Ukuba ufuna iintlanzi ezimbini ze-llama echibini lakho, ubuncinci sukukhetha iintlanzi ezimbini zesini esifanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukunyamekela i-llama angelfish
Ezona ntlobo zeentlanzi zibenazo ekhaya